काठमाडौँ, २५ साउन। सैनिक कल्याणकारी कोषले आफ्ना हिताधिकारीलाई रु चार अर्ब ४३ करोड ११ लाख ८६ हजार लघुवित कर्जा उपलब्ध गराएको छ । सेवामूलक व्यवसाय सञ्चालन गरी लाभग्राहीको आय आर्जन वृद्धि गराउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको लघुवित कर्जा तथा सुलभ घरकर्जा कार्यक्रमबाट हालसम्म २६ हजार ६४१ जना लाभान्वित भएको कोषका निर्देशक सागरबहादुर केस..
काठमाडौँ, २५ साउन । निर्माणाधीन काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्गमा समेत पेट्रोलियम पाइ..
काठमाडौं, २४ साउन । सामाजिक सेवाका नाममा भित्रिएका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस..
बुटवल, २३ साउन । रूपन्देहीमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा भूमाफियाहरूले करोडौं मूल्य पर्ने सरकारी जग्गा हत्याउन खोजेको पाइएको छ । व्यक्तिका नाममा लालपुर्जै बनाएर सरकारी जग्गा किनबेच गर्न खोजेपछि सो घटना बाहिरिएको हो । जिल्लाको मायादेवी गाउँपालिका–४ झुलनीपुरस्थित २ बिघा ३ कट्ठा १ धुर जग्गा सरकारी स्रेस्ता कायम ..
ललितानिवास प्रकरण : २० रोपनीभन्दा बढी जग्गै घूस
काठमाडौं, २३ साउन । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने क्रममा २० रोपनीभन्दा बढी जग्गा ‘घूस’ बपत लेनदेन भएको खुलेको छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले ती शंकास्पद जग्गाधनीहरुसित बयान लिइरहेको छ । तीमध्ये अधिकांश तत्कालिन उच्च पदस्थ पदाधिकारीका परिवार..
निजगढ विमानस्थल विश्वकै सानदार बन्ने
काठमाडौ,२३ साउन । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको शिलान्यास यसै वर्ष गर्ने तयारी भएको जानकारी दिनुभएको छ । बुधबार मन्त्रालयमा पत्रकारसँगको छलफल कार्यक्रममा सन् २०१९ भित्रै कम्तीमा शिलान्यास गरिसक्ने उहाँले बताउनुभयो । सन् १९८५ देखि नै निजगढमा विमान..
काठामाडौं, २२ साउन । राम्रो क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग एउटा सामान्य मेसिन बिग्रिँदा ६७ दिनदेखि बन्द छ । आठ सय मेट्रिक टन क्षमताको उद्योग क्लिंकर पोल्ने प्रारम्भिक मेसिन (सस्पेन्सन प्रि–हिटर) बिग्रेपछि १८ जेठदेखि बन्द भएको हो । बन्द हुनुअघिसम्म दैनिक सात सय मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको थियो । मेसिनको मू..
१ अर्बको ठेक्का, प्रगति शून्य
मनाङ ,२२ साउन । विकट भौगोलिक जिल्ला मनाङमा पूर्वाधार निर्माणले गति लिन सकेको छैन । ठेक्का मात्रै ओगट्ने तर काम नगर्ने ठेकेदारका कारण मनाङ पछाडि परेको स्थानीय बताउँछन् । काठेपुलको भरमा यात्रा गर्न बाध्य छन् स्थानीय तथा पर्यटकहरु । काठेपुलबाट यात्रा गर्दा खसेर मरिएला भन्ने डरले आक्रान्त बनेको स्थानीय फिन्जो लामाले बताउनुभयो । ठेके..
कौडेना (सर्लाही), २२ साउन । तराईको ‘लाइफ लाइन’का रूपमा रहेको हुलाकी राजमार्गको निर्माण आउँदो तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने भएको छ । यो राजमार्गको सबै खण्डको ठेक्कापट्टा लागी निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ । भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले सडक विकासमार्फत कृषि, व्यापार, उद्योग र पर्यटनको विकास गरी तराई मधेसका जनत..
काठमाडौँ, २२ साउन । गृह मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक प्रगति विवरणमा सुन तस्करीको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल तोड्न सफल भएको घटनालाई महŒवपूर्ण उपलब्धि मानेको छ । हप्ता दिनअघि सार्वजनिक प्रगति विवरणको महŒवपूर्ण उपलब्धि सुन तस्करीको सञ्जाल तोडिएको गृहको दाबी सेलाउन नपाउँदै गोरखाको उत्तरी क्षेत्र धार्चेस्थित खोर्लाबास ओडारम..
काठमाडौँ, २१ साउन । के तपाईँले रु ५० लाखभन्दा बढीको ऋण लिन लाग्नुभएको छ ? व्यापार व्यवसाय विस्तार तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोच बनाउनुभएको छ ? यदि छ भने अब तपाईँसँग स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य हुनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले रु ५० लाख वा […]
सुकुम्वासी सधैँ सुकुम्वासी रहिरहनुपर्छ भन्ने छैन: मन्त्री अर्याल
काठमाडौँ, २१ साउन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले ‘भूमि सम्बन्धी (आठौँ संशोधन) विधेयक– २०७५ लाई छिटो समितिबाट पारित गरिदिन आग्रह गरेको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको सो विधेयक प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा दफावार छलफलका क्रममा रहेको छ । मन्त्रालयले सो विधेयक एक..
काठमाडौँ, १९ साउन । तोकिएको समयमा काम नहुने रोगबाट व्याप्त छ नेपाल । साना, मझौला तथा ठूला आयोजना त्यसैको मारमा परेका छन् । निर्माण व्यवसायीको अनेकन बहाना, स्थानीयवासीको अवरोध तथा अन्य प्राविधिक र प्रशासनिक झन्झटका कारण पनि परियोजनामा ढिलाइ हुँदै आएको छ । प्राकृतिक विपत्ति तथा अन्य कारण पनि आयोजनाको ढिलाइका कारण बन्दै आएका छन् । ..
काठमाडौँ, १९ साउन । सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको २२ प्रतिशत भौतिक निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । कूल ९०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सतलज विद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको छ । आयोजना निर्माणका लागि नेपालमा एसजेभिएन अरुण तेस्रो जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरिएको छ । सोही कम..
ललितपुर, १९ साउन । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले स्वच्छ कर प्रशासनका माध्यमबाट राजश्व सङ्कलन गरी सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउँदै विकासलाई तीव्रता दिन सरकार क्रियाशील रहेको बताउनुभएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागद्वारा आज यहाँ आयोजित व्यवस्थापन गोष्ठीमा उहाँले कर प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउने र एकीकरण गर्ने सन्दर्भमा सुधा..
इनरुवा, १९ साउन । सुनसरी सदरमुकाम इनरुवा– ४ का एकै परिवारका सात जनामा डेङ्गुको सङ्क्रमण भेटिएको छ । केही साताअघि देखापरेको डेङ्गु नियन्त्रणमा आएको बताइए पनि पछिल्लो पटक स्थानीय एक परिवारका सात जनामा डेङ्गुको सङ्क्रमण फेला परेको इनरुवा नगरपालिकाले जनाएको छ । वडा नं ४ मा निवासी सन्तोष गुप्ताको परिवारमा सातै जनामा सो रोग फेला परेको..